PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Masihleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - IINDABA - MANONO MDLAZI
SIYALEQA bantase asinaxesha, unyaka uphelile nank’uThuma mina, kufuneka siqabelise umsebenzi welizwe ngokukhawuleza, ukuze singaphazamisani ke, masenzeni kanje.
Siphela kwiminyaka engamashumi amathathu ukukuculela, sikuthengele izipho nekhekhe ngosuku lwakho lokuzalwa, ngapha ko30 bantase sesingafane sikuqhwabele nje izandla xa uThixo ekongezele omnye unyaka, masingamoshelwa ixesha ngamanani angekho kwikhalenda, besenditshilo ndathi asinaxesha, siyaleqa, uThumamina usemva kwethu.
Unyaka uphelile siyayazi bakho abaza kuthathwa babe ngos’Nothumamina, oos’Nohombile. Nanjengoko besihamba kunye unyaka wonke ze ningasilibali ke boomzala xa nisitya utsiki. Uzusibekele iiplate zethu xa kuphakwa, utsho ukuba uneembokodo ebezisiwa zivuka nawe kule ndlela, lilonke nazo uzicelela isuntswana kula mkhono katsiki, kuyangcamliswana kaloku mntase oko besihamba kunye unyaka wonke.
Eny’into ke niyandazi zimbokodo zam, ishishini lisaqhuba aph’ecaleni ze ningandilibali nakulungelwa. Kaloku ndisengulo ubook-wayo ukuyoba ngumphathinkqubo katsiki wakho, kanti ndiyayala nokuyala, ndiyamthiya nomtshakazi, ndiyamncedisa ekwenzeni iti emveni kweziyalo, kanti nasekuseni ndiba yialam yakhe ndiyamvusa ayokwenzela utatazala nomamazala iti, ndimncedise nokwenza isidlo sakusasa, yonke lo nto ndiyenza ngamaxabiso aphantsi.
Xa ungenayo epheleleyo siyabonisana, ndiyazazi kaloku iingxaki nam ndandike ndaxakeka ngaphambi kokuba ndibe neli shishini, ungabhatala kancinci kancinci nge-instalment.
Kanti kule nto yam yokuthanda ukwehla ndinyuka kwezi zitalato zebhayibhile ndithe ngqi nevesi ethi, uMam’uHanna, uMariya waseMagadala, uMaria umama kaYesu nenkosikazi kaNowa - yayizintombi zakwaRhadebe zaze zatshatela eMaCirheni zonke.
Ukanti uPenina yena wayenguMamZangwa, waze watshatela kooFaku, ngenxa yobukrwada bakhe waxabana nomamazala wakhe uMamTshawe, wagxothwa emzini.
Ithi xa iqhubeka le vesi, uJezabel wayenguMaNzaba waze watshatela kooDlamini, wagxothwa noonyana bakhe abathathu abangengabo abasemtshatweni.
Unyana wokuqala yayinguJola, owesibini inguTolo owesithathu yayinguBhele, yeyona nto eyambuyisa emzini ke leyo uMaJJ, kudala ke la mfazi wahamba le ilapha phandle ndimncamile!